"Saacado gudahood ayuu isku badelay fikirkii aan ka haystay Muqdisho" - BBC News Somali
"Saacado gudahood ayuu isku badelay fikirkii aan ka haystay Muqdisho"
Xeebta magaalada Muqdisho waxa dhawaan laga hirgaliyay doon kuwa lagu dalxiiso ah oo markiiba martigalin karta illaa afartan qof.
Waxaa doonta la socda lix shaqaale ah oo midkood uu yahay naaquudaha doonta iyo koox ka shaqaynaysa maqaayada ku dhextaala.
Doontan oo loogu magacdaray Faynuustii Liido ama La Lanterna ayaa shaqaysa habeen iyo maalinba iyadoo laga heli karo cuno fudud, cabitaan iyo bun, waxayna durba soo jiidatay macaamiil farabadan oo awal u tamashle tagi jiray maqaayadaha laga qaxweeyo ee ku dherarsan xeebta magaalada.
Diyaarad rakaab oo ku dhacday dalka Micronesia
Markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka oo shil galay
Cabdiqaadir Maxamed Ibrahim oo ka mid ah ganacsatada iska leh doontan ayaa Weriyaha BBC-da ee Muqdisho Ibrahim Maxamad Adan oo laftigiisu doontaasi korey uu u sheegay in fikirkan ay uga gol lahaayeen sidii ay dadka u heli lahaayeen goob ay ku nastaan igaya oo biyaha badda dushooda saaran.
"Waxaan jeclaannay inaan dadka tusno in uu dalka hormar yeelan karo, lana hirgelin karo fikrado badan, ayna heli karaan fursad ay badda dusheeda ku saarnaan karaan muddo dheer, markii hore dadka wey nala yaabi jireen balse hadda wey na soo dhaweeyeen." Ayuu yiri Cabdiqaadir Maxamed.
Doonta ayaa hadda waxa ay soo jiidatay macaamiil badan oo badda u dalxiis taga xilliyada fasaxa ah, iyadoo ay mararka qaar adkaato in la helo kursi bannaan.
Umul Khayr Sheikh Cabdirahmaan oo ka mid ah dadkii u dalxiis tagay doontan ayaa BBC-da u sheegtay in ay aad uga heshay adeeggan ayna jeclaan lahayd in doomaha noocan oo kale ah lagu soo badiyo gudaha dalka.
"Dadkii aan isla saarnayn doonta cabsi ayaa ka muuqatay balse aniga waan jeclaaday, waxaana leeyahay waa hormar dalkeenna ku soo korartay, waxaana rajaynayaa in tan kuwa ka waaweyn dalka la keeni doono mustaqbalka dhaw. Adeegyada badan ayaa halkan laga helaa cunnooyin iyo cabitaanno, waana meel aad looga shaqeeyey aad ayaana uga helay farxadaydana lama soo koobi Karin xilligii aan saarna doonta." Ayey tiri Umul Khayr Sheikh Cabdirahmaan.
Cabdirisaaq Xaaji Cabdi oo Magaalada Muqdisho dhawaan ku soo laabtay ayaa asagana BBC-da u sheegay in uusan filaynin in xeebta Liido laga heli karo doon noocan oo kale ah.
"Waa markii iigu horreysay ee aan bun ku cabbo dusha xeebta Liido, Muqdisho waxaan joogaa muddo saacado ah, waxayna ii tahay farxad aad u weyn, waxaana badelmay sawirkii aan Muqdisho ka haystay xilligii aan ka maqnaa, awal kuma fikiraynin in habeennimo aan saarnaan doono dusha badda Liido taasina waa hormar la gaaray."
Magaalada Muqdisho oo mararka qaar laga soo sheego wararka adag ee dhanka siyaasadda iyo ammniga ayaa waxaa sidoo kale jira kuwa la xirriira ganacsiga iyo hormar dhanka fikrada ah taasi oo soo jiidata dadka qurba joogta ah.